Monday December 18, 2017 - 13:16:06 in Wararka by Super Admin
Q.Midoobe ayaa sheegtay in ay waddo baaritaanno ku aaddan dil maalmo ka hor dhacay wadanka Koongada Dimuquraadiga ah dilkaas oo ay fuliyeen maleeshiyaad kasoo tallaabay dhanka wadanka Uganda.
Ugu yaraan 14 askari oo katirsan ciidamada Tanzania ayaa lagu dilay wadanka koongada dimuquraadiga ah oo kamid ah wadamada harada qaaradda afrika dhaca.
Guuto katirsan ciidamada dowladda Uganda oo sifo nabad ilaalineed ku joogta Koongo ayaa la sheegay in ay weerartay goob ay ku sugnaayeen ciidamada Tanzania balse arrinkaas waxaa beeniyay Howlgalka Q.Midoobe.
Sarkaal katirsan Booliska Congo ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka oo ka dhacay deegaanka 50KM ujira xuduudda Uganda ay fuliyeen ciidamo aad u hubeysan oo dhanka Yugaandha kasoo tallaabay balse wuxuu diiday in uu bixiyo caddeymo intaas ka dheer.
dowladda Tanzania ayaa sheegtay in ay cabasho ka dhan ah falkaas ay ugudbisay dowladda Uganda waxaana laga cabsi qabaa in falkan uu colaad hor leh labada dal ka dhax dhaliyo kuwaas oo sanado ka hor dagaal uu dhaxmaray.
Kumanaan katirsan Melleteriga Uganda oo ku sugan wadanka Congo ayaa la rumeysanyahay in ay weerarkan wax ka ogyihiin balse taliyaha ciidamada Tanzania ee Congo ku sugan ayaa warbaahinta u sheegay in ay ka war sugayaan baaritaannada ay waddo Q.Midoobe.